Fetim-pirenen’ny Repoblikan’i Korea Atsimo – Sénat de Madagascar
Fetim-pirenen’ny Repoblikan’i Korea Atsimo
Notontosaina ny alatsinainy 03 septambra 2018 tetsy amin’ny Carlton Anosy ny fankalazana ny faha 4351 taona ny fetim-pirenen’ny Repoblikan’i Korea Atsimo. Ny “Finoana no fahasambaran’ ny olombelona”. Io no firehan-kevitra ijoroan’ny Koreanina Atsimo hatramin’izay ka mandraka ankehitriny. Ny lanonana dia teo ambany fitarihan’ny Ambasadaoro Koreana voalohany eto Madagasikara LIM SANG WOO, notronin’ny Loholon’ny Madagasikara notarihan’ny Filohany Rivo RAKOTOVAO ,ireo mpikambana ao amin’ny governemanta sy olo-mana-kaja maro.
Nambaran’ny Ambasadaoro LIM SANG WOO nandritra ny fandraisam-pitenenany, fa mifantoka amin’ny lafin-javatra telo lehibe ny tanjon’ny Koreanina Atsimo eto Madagasikara:
– Ny fiaraha-miasa eo amin’ny lafiny ara-toe-karena sy fanamafisana ny fifanarahana ara-barotra misy eo amin’ny firenena roa tonta. Tafiditra ao anatin’izany ny fizarana traikefa mba hisian’ny fampandrosoana maharitra.
Hisy araka izany ny “1er business forum” izay ho tontosaina ny 04 septambra 2018 ho avy izao eto Antananarivo.
– Fifandraisana ara-politika mifantoka amin’ny lafiny ara-demokrasia. Fanirian’izy ireo ny hisian’ny fifidianana madio, mangarahara sy eken’ny besinimaro izay ho tontosaina eto Madagasikara amin’ity taona 2018 ity. Misy vola mitentina iray hetsy dolara atolotrin’ny Repoblikan’i Korea Atsimo ny CENI ho fanampiana amin’ny fikarakarana izany fifidianana izany.
– Fifandraisana ara-kolotoraly izay manamafy ny fihavanana eo amin’ny Madagasikara sy Korea Atsimo.
Notsindrian’ny Minisitry ny fiarovam-pirenena, ny Jeneraly Béni Xavier RASOLOFONIRINA, tamin’ny fandraisany fitenenana kosa fa zavatra roa lehibe no ankalazaina dia ny faha 25 taona ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin’ny firenena roa tonta zay niatomboka ny 29 mai 1993 sy ny faha 4351 taona ny fetim-pirenen’ny Repoblikan’i Korea Atsimo. Hohamafisina ny fiaraha-miasa hoy ihany izy ary efa maro ireo Koreanina tonga mampiasa vola eto Madagasikara, porofon’izany ny fisian’ireo fiara maro vita Koreanina eto an-toerana.
Naneho ny fisaorana ny Repoblikan’i Korea ny Jeneraly RASOLOFONIRINA amin’ny tolo-tanana sy ny fandraisany andraikitra amin’ny fikarakarana ny fifidianana eto amintsika izay hotanterahana ny 07 novambra 2018 izao.